Gịnị kpatara okike oncology a na-ejikarị daa? - Dr. Adem
Eziokwu nke taa
1. Na -ewe Ike dịghịzi usoro
Usoro mgbochi siri ike na-echebe anyị pụọ n'ọrịa kansa, na ọ fọrọ nke nta ka ndị ọrịa niile nwee ọrịa cancer n'ihi sistem na-adịghị ike.
Usoro ọgwụgwọ oncology dị ka kemoterapi na radiotherapy na-emebi mkpụrụ ndụ kansa yana sel dị mma. Mgbe usoro ọgwụgwọ ọdịnala gasịrị, sistem gị ji alụso ọrịa ọgụ adịghị ike karịa ka ọ dị tupu usoro ọgwụgwọ ahụ, nke a bụkwa otu ihe kpatara ọrịa cancer na-abịakarị mgbe ntakịrị oge.
2. Ahụ mmebi
Usoro ọgwụgwọ oncology na-emebi ahụ anyị. Akụkụ ahụ dị oke mkpa dịka ụbụrụ, obi, imeju na akụrụ nwere oke na arụ ha. Ọrịa anụ ahụ na mmebi na-adịgide adịgide bụ nsonaazụ. Akụkụ ahụ adịghị ike na-emetụta sistem ahụ anyị na-adịghị mma ma bụrụkwa ihe kpatara na ahụ anyị anaghị anabata usoro ọgwụgwọ ọzọ.
3. Ime cancer ọzọ na-eme ihe ike
Ihe na-eto eto nwere mkpụrụ ndụ cancer dị iche iche, nke ha nwere ihe iche iche. Usoro ọgwụgwọ dị iche iche na - egbu mkpụrụ ndụ cancer ndị na - adịghị ike (nke dị nro) ma na - ekwe ka sel ndị siri ike (nke na - eguzogide) dị ndụ. Mkpụrụ ndụ ndị a na - eguzogide ọgwụ na - amalite ịmụba ngwa ngwa mgbe ọgwụgwọ gasịrị. Ha na-akpasu agha ike karịa ndị nke mbụ ma sie ike ịgwọ. Dọkịta ahụ kwesịrị ịbawanye usoro onwu ogwu ma ọ bụ tinye ọgwụ ndị ọzọ, nke na-eduga na nsonaazụ ndị ọzọ.
4. specifickpachapụ ya ọnụ bia
Ọgwụ ọgbara ọhụrụ dị ka Checkpoint-Inhibitors nwere mmetụta ọghọm dị ala karịa usoro ọgwụgwọ anwụrụ. Ihe ọghọm ha buru oke ibu bụ na ha akọwapụtara ya nke ọma. Ha na-eme ụfọdụ ihe nrịbama na mkpụrụ ndụ cancer. Ma mkpụrụ ndụ cancer na-agbanwe (na-agbanwe) mgbe oge ụfọdụ ma bụrụ nke na-eguzogide ọgwụ, nke yiri nke chemotherapies.
5. Mbelata ogo nke ndu
Nsonaazụ ndị dị na ọgwụgwọ ahụ na-eduga n'agụụ, nke ahụ na-ebutekwa oke ibu na ahụ ọzọ na-eme ka ike gwụ gị. Ofzọ ndụ onye ọrịa na-agbada ngwa ngwa, nke na-emetụta akparamaagwa ya, na njikere ọ dị ịlụ ọgụ. Iru újú na-adịghị ala ala na-eduga n'ịmepụta homonụ nchegbu, nke na-emebi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
6. Inye ego echiche ụgha
Ndị ọrịa cancer na-ejedebe olileanya ụgha na-akwụsị ọgwụgwọ ha. Ọrịa cancer bụ ọrịa na-adịghị ala ala, ọ nweghịkwa ọgwụgwọ ga-ekwe nkwa na mbibi mkpụrụ ndụ kansa niile. Ọbụna ọgwụgwọ a sị na ọ ga-aga nke ọma na nyocha nyocha apụtaghị na ihe egwu ahụ agwụla.
7. Mba ọkachamara n'azụ
Enweghị usoro nlekọta ahụ mgbe emesịrị usoro ọgwụgwọ. O nweghi onye na-eme ka iweghachite sistem ma ọ bụ arụ ọrụ akụkụ ahụ. Naanị mgbe a gbasachara ya bụ mmemme ịchọpụta ihe bụ ebumnuche ịchọpụta ajọ ọrịa kansa n'oge mbụ enwere ike. Nke a bụ nduhie n'ihi na usoro ọhụụ ugbua dịka CT, MRI, ma ọ bụ PET nwere ike ịchọpụta etuto ahụ karịa otu nha. Obere akpụ nke na-atụ naanị milimita n’arọ n’arọ ka nwere ike ịchepụta mana enwere ike ị nweta ọtụtụ nde mkpụrụ ndụ cancer. Mkpụrụ ndụ ndị ahụ nwere ike gbasaa n'ime ahụ ma mepụta ọnya ọrịa ọhụụ.
8. O nweghi mgbanwe na ndu ndu
Ọtụtụ ọrịa cancer metụtara ibi ndụ na-adịghị mma. Nchekasị na-adịghị ala ala, mmanya, ise anwụrụ, enweghị egwuregwu, na nri adịghị mma bụ ihe ndị dị ize ndụ kansa. Ndị dọkịta na-ahụkarị mgbakọ na-edozi nsogbu a. Ọgwụ ndị a na-elekwasị anya na-egbu naanị mkpụrụ ndụ kansa.